MDC Alliance Yokurudzira Mushandira Pamwe Munyaya dzeSarudzo
Bato reMDC Alliance rinoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuita muonera pamwe pakuronga hwaro hwekuita sarudzo dzinogamuchirwa nemunhu wese munyika kuitira kuti Zimbabwe ienderere mberi pasi bopoto rezvematongerwo nyika.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare,munyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance, VaIan Makone, vati kuti nyika ibudirire gakava rine chekuita nezvinenge zvabuda musarudzo rinofanirwa kupedzwa nekuisa musoro pamwe chete kwevana veZimbabwe kuitira kupedza dambudziko iri.
Mutevedzeri waVaMakone, Amai Ellen Shiriyedenga, vatiwo bato reMDC Alliance rakatokurukura zvarinoda kuti zvigadziriswe sarudzo dzegore ra2023 dzisati dzaitwa.
Amai Shiriyedenge vati zvimwe zviri kutarisirwa nebato ndezvekuti sangano rinoita zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rive rakasununguka sezvinotarwa nebumbiro remitemo yenyika, kuti vezvematongerwo enyika vaziviswe kuti miganhu inotarwa kuratidza kuwandakwematunhu achamirirwa musarudzo ichange ichiitwa sei uyewo kuti vavhoti vakwanise kunonyoresa kuvhota vakasununguka vasingafambi mitunhu mirefu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZEC sezvo mushandi mukuru anowona nezvesarudzo muZec, VaUtoile Silaigwana, vati titumire mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati zvinyunyuto nehurukuro dzekugadzirisa kuti nyika iende mberi zviri kuitwa kumisangano yePolitical Actors Dialogue kana kuti Polad.
VaMugwadi vati kana bato reMDC Alliance risingagoni kubatana nevamwe, ndiro rega rinosaririra.
Asi mumwe mugari wemuHarare, VaTawanda Simango, vatiwo hurukuro dzechokwadi dzekuti nyika iite sarudzo dzakajeka dzisina mvongamupopoto dzinobatsira mubudiriro yenyika pamwe nekuyanana kwevana veZimbabwe.
Dzimwe nyanzvi mune zvehupfumi nebudiriro dzinotiwo nyaya yekugaroitwa kwesarudzo dzine mutauro ndizvo zviri kukonzerawo kutadza kusimukira kwehupfumi hwenyika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichiita sarudzo dzine mutauro, mapato anopikisa achichema chema nerekuti akabirirwa musarudzo idzi.
Pari zvino pane nyaya iri kunetsa yezvakabuda musarudzo yemumiriri weChegutu West muna 2018, iyo yakaona VaGift Konjana veMDC vachikunda VaDexter Nduna veZanu PF, asi ZEC ikakanganisa kudoma VaNduna semunhu akakunda musarudzo iyi.
ZEC payakada kugadzirisa zvayakanga yakanganisa, yakaudzwa kuti yaive isina simba rekugadzirisa zvayakanga yakanganisa, asi kuti izvi zvaikwanisa kugadziriswa chete nedare reElectoral Court.
Nyaya iyi yava muConstitutional Court mushure memakore matatu sarudzo dzaitwa, vanhu vekuChegutu West vachimirirwa nemunhu akakundwa musarudzo iyi.